Fananan-tany: mahaliana ny fampahafantarana ny asan’ny « topographe » | NewsMada
Fananan-tany: mahaliana ny fampahafantarana ny asan’ny « topographe »
“Mbola maro no tsy mahalala ny tena asan’ny “topographe” sy ireo fitaovana ampiasaina amin’izany”, hoy Ratiarison Saddà Eric, filohan’ny fikambanan’ny mpianatra nivoaka ho injeniera “topographe”, teny amin’ny Enam. Izay indrindra ny nahatonga azy ireo hikarakara hetsika, “Land surveyor’s week”, eny amin’ny lapan’ny Kolontsaina etsy Mahamasina, nanomboka omaly.
Efa maro ireo liana tamin’ny hetsika, toy ny mpianatra, manana vina ny hiditra eo amin’ity sehatra asa iray ity. Raha fintinina, mandrefy ireo zavatra rehetra eo ambonin’ny velaran-tany iray (zavatra voajanahary sy ireo naorina) sy mametraka izany anaty sarin-tany ny asan’ny “topographe”.
Misy ny fampirantiana ary miara-dalana amin’izany ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny mpitsidika sy ireo matihanina. Hofaranana amin’ny fiaraha-mifaly ny hetsika, eny amin’ny Paon d’or Ivato, rahampitso hariva.